UNcobo uyayincoma iPSL ngodaba esolwa ngalo lwecala leRoyal AM
U-Ace Ncobo, owayeyimenenja yePremier Soccer League (PSL), uyincomile indlela iPSL eluphethe ngayo udaba oluthinta iRoyal AM. Sekuyisikhathi eside kunecala leRoyal AM eliqale kusanda kuphela isizini yeGladAfrica Championship.
IRoyal AM ifuna kube iyona okuthiwa ingompetha beGladAfrica Championship ka-2020/2021. Kwaba nesiphithiphi ngemuva kokuthi iSekhukhune United iwine icala layo nePolokwane City eyephula umthetho wokuba nabadlali abahlanu be-Under 23 eqenjini losuku.
ISekhukhune yanikwa amaphuzu amathathu namagoli amathathu nokwakuchaza ukuthi iyona ompetha beChampionship.
IRoyal AM kwase kuphoqeleka ukuthi idlale imidlalo yokuhlunga nokuyinto engayenzanga. Lokhu kugcine kuholele ekutheni iPSL iyibizele kwiDisciplinary Committee yayo, nakhona okuyinto engakayenzi.
UNcobo uthe ubona iPSL ihambisa kahle yonke into kuleli cala, futhi iyazama ukungenzi noma ukumemezela izinto ezizoyifaka enkinngeni.
“Ngiyayithanda indlela enokuqaphela nokuqikelela iPSL esingatha ngayo lolu daba. Benza ngendlela ekahle kakhulu ukuhlonipha ilungelo leqembu lokudlulisela icala phambili ukuze leneliseke,” kusho uNcobo owayengunomempe ohlonishwayo ngezikhathi zakhe.
“Bayakugwema ukwenza isimemezelo esingase sibahlaze ngokuhamba kwesikhathi.”
NgoMsombuluko sichithiwe yinkantolo isicelo seRoyal AM sokuthi iPSL nesikhulu sayo esiphezulu esibambile, uMato Madlala, batholwe bephule umthetho wenkantolo ngokuvumela ukuthi kudlalwe imidlalo yokuhlunga. IRoyal AM kumele ukuthi ivele phambi kweDC yePSL ngoMgqibelo.
FUNDA NALA: UPitso uthi kunomdlali azomlanda kuleli kodwa akasho ukuthi ubani
“Ngicabanga ukuthi ukungayi kwabo phambi kweDC bekunobuhlakani obuthile. Bebelinde isinqumo senkantolo ebesizoqinisa icala labo, ukube siphume sivuna bona.
“Njengoba inkantolo isichithile isicelo sabo ngicabanga ukuthi ngeke besalokhu behlehlisa ukuvela phambi kweDC,” kuphetha uNcobo.
Njengamanje akukaziwa ukuthi imidlalo yeDStv Premiership neyeGladAfrica Championship izoqala nini. Kungenzeka ukuthi ukudonsa kwaleli cala yikona okuvimbe iPSL ukuthi imemezele ukuqala kwemidlalo yesizini entsha.
Previous Previous post: U-Isaacs uyayibona nje eyezitobha, ukhala ngabahlaselayo kwiChiefs
Next Next post: UBrooks usebheke ukubethela indawo yakhe kwiBafana enkulu